Ahoana ny fisafidianana ny sakafon'ny alika voan'ny displasia | Tontolo alika
La displasia hip Aretina taolana mampihetsi-po be dia be io amin'ny alika, indrindra amin'ny lehibe. Ny fitomboana haingana sy ny fivelaran'ireto biby ireto dia mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny olana iraisana. Mba hahafahan'izy ireo mijanona amin'ny endrika tsara dia ilaina ny manome sakafo matanjaka tsara miaro ny taolany.
Noho izany, raha voan'ny aretina ity namanao ity dia manasa anao izahay hanohy hamaky hahalalana ny fomba hisafidianana ny saka ho an'ny alika voan'ny displasia.
Betsaka ny sakafo azontsika jerena amin'ny fivarotana biby dia tsy tsara araka ny tokony ho izy, ary kely kokoa aza ho an'ireo alika voan'ny displasia. Ny ankamaroany dia misy serealy izay, na dia loharanom-proteinina aza izy ireo (mora vidy, eny an-dàlana: 20 kg eo ho eo ny vidin'ny katsaka 7kg), izy ireo koa dia singa iray izay mety hiteraka alèjika amin'ny alika, toy ny dermatitis.
Ny idealy dia omeo sakafo na sakafon-kalitao tsara ilay namantsika volom-borona, izay tsy vitan'ny tsy misy serealy (katsaka, varimbazaha, oaka, ary na ny vary aza), fa koa tsy manana asidra amine sy / na antioksida tsy voajanahary izay tsy fantatsika na avy aiza.
Alika voan'ny dysplasia hip mila mihinana sakafo, voajanahary na sakafo, izay manankarena asidra matavy omega 3, toy ny menaka trondro. Ankoatr'izay, koa ilaina ny manome chondroprotectors amin'ny kapsula, raha azo atao voajanahary, toy ny chondroitin sulfate na ireo vita amin'ny tahomavo maitso. Na dia efa misy izany aza ny sakafo omentsika azy dia tsy maintsy omentsika azy koa ny kapsily satria tsy fanafody amin'ny tenany izy ireo, fa famenon-tsakafo hikarakara ny taolany kosa.
Miaraka amin'ny sakafo ara-dalàna sy fitsaboana ara-pahasalamana ny alika dia afaka manohy mandehandeha sy miala voly toy ny fanaony hatrizay ny alika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Ahoana ny fomba hisafidianana ny saka ho an'ny alika voan'ny displasia
Ny milina fivarotana voalohany ho an'ny alika dia tonga any Espana
Albatrox, alika voaofana mamantatra fandrika